Gottfried Wilhelm Leibniz: biography uye zvinoitwa musainzi | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 29/04/2021 08:33 | Ciencia
Mune ino blog tinogara tichitaura nezve akakosha masayendisiti uye nemipiro yavo kune nyika yesainzi. Nekudaro, vazivi vakaitawo mipiro yakawanda senge Leibniz. Iye muzivi ane zita rizere anonzi Gottfried Wilhelm Leibniz uye aivewo wefizikisi uye nyanzvi yemasvomhu. Yaive yakakosha pesvedzero mukuvandudzika kwesainzi yemazuva ano. Uye zvakare, ndiye mumwe wevamiriri veiyo rationalist tsika yemazuva ano sezvo ruzivo rwake musvomhu nefizikisi rwakashandiswa kutsanangura zvimwe zvakasikwa uye zviitiko zvevanhu.
Naizvozvo, isu tichaisa iyi chinyorwa kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve Leibniz's biography uye feats.
2 Mafambiro aLeibniz nemipiro
3 Infinitesimal calculus mumasvomhu
4 Zvine musoro
5 Uzivi hwaLeibniz
Akazvarwa muna Chikunguru 1, 1646 muLeipzig, Germany. Akakurira mumhuri yekuzvipira yeLutheran kusvika kumagumo ehondo yemakore makumi matatu. Hondo iyi yakanga yasiya nyika yese yaparara. Kubva zvaaive mudiki, pese paange ari kuchikoro, anga ari rudzi rwekuzvidzidzisa-kubva kubvira paakakwanisa kudzidza zvinhu zvakawanda ega. Pakazosvika makore gumi nemaviri, Leibniz anga atodzidza mutauro wechiLatin ari ega. Zvakare, panguva imwecheteyo aidzidza chiGiriki. Iyo yekugona kugona yaive yakakwira kwazvo.
Nechekare muna 1661 akatanga kudzidzisa mumunda wezvemitemo paUniversity yeLeipzig kwaainyanya kufarira varume vaive nyeredzi mukutanga kwesainzi nehunyanzvi kumukira kweazvino Europe. Pakati pevarume ava vakanga vavandudza hurongwa hwese vaive Galileo, Francis Bacon, René Descartes naThomas Hobbes. Pakati pezvazvino zvendangariro zvaivapo panguva iyoyo mamwe masayendisiti uye dzimwe pfungwa dzaAristotle dzakawanikwa.
Mushure mekupedza zvidzidzo zvake zvemutemo, akapedza makore akati wandei muParis. Pano akatanga kudzidzisa masvomhu uye wefizikisi. Mukuwedzera, akakwanisa kusangana nevanozivikanwa vazivi uye masvomhu enguva uye akadzidza zvakadzama kune vese vaimufarira. Akange akadzidziswa naChristian Huygens uyo aive mbiru yakakosha kuitira kuti akwanise kugadzira dzidziso yekusiyanisa uye yakakosha Calculator.
Akaenda kumatunhu akasiyana eEurope achisangana nevamwe vevamiriri vevazivi venguva ino. Mushure merwendo urwu rwekuEurope akatanga chikoro chesainzi muBerlin. Iyi academy yakanga iine kuyerera kukuru kwevadzidzi vaida kuziva zvakawanda nezvesainzi. Makore ekupedzisira ehupenyu hwake akapedzwa kuyedza kuumbiridza kutaura kukuru kwazvo kwehuzivi hwake. Nekudaro, ichi chinangwa hachikwanise kubudirira. Akafira muHanover munaNovember 1716.
Mafambiro aLeibniz nemipiro
Isu tichaenda kunoona izvo zvave zviito zvikuru uye mamiriro eLeibniz kune nyika yesainzi nehunyanzvi. Sezvakaita nevamwe vazivi uye masayendisiti enguva yacho, Leibniz nyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana. Tinofanira kugara tichifunga kuti munguva dzino pakanga pasati paine ruzivo rwakawanda pamusoro penzvimbo dzese, saka munhu mumwe chete anogona kuve nyanzvi munzvimbo dzinoverengeka. Parizvino, unofanirwa kuisa hunyanzvi munzvimbo imwe chete uye kunyangwe zvakadaro zvakaoma kuziva ruzivo rwese nezve iyo nharaunda. Uye chokwadi ndechekuti huwandu hweruzivo uripo uye chii chinogona kuramba uchiongororwa zvine chekuita nezvaimbove mutsauko wakashata.
Simba revanyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana rakamutendera kuti aumbe dzidziso dzakasiyana uye nekuisa hwaro hwekuvandudza kwesainzi. Mimwe yemienzaniso yaive mune masvomhu uye pfungwa pamwe neuzivi. Tichagovanisa izvo zvipo zvavo zvikuru ndezvi:
Infinitesimal calculus mumasvomhu
Pamwe naIsaac Newton, Leibniz anozivikanwa semumwe wevagadziri vecalculus. Kushandiswa kwekutanga kweiyo yakakosha Calculator kunoshumwa mugore ra1675 uye Ndingadai ndakaishandisa kuti ndiwane nzvimbo iri pasi pebasa Y = X. Nenzira iyi, zvinokwanisika kuburitsa zvimwe zvirevo senge chakasangana kutenderera S uye kwakapa kumutemo waLeibniz, uri iwo chaiwo mutemo wechigadzirwa chechiyero chakasiyana. Akabatsirawo kududziro yezvinhu zvakasiyana siyana zvemasvomhu izvo zvatinodaidza kuti infinitesimals uye kutsanangura zvese zvavo algebraic zvivakwa. Kwechinguva paive nezvakawandisa zvakawanda zvaifanira kudzokororwa nekugadziridzwa gare gare muzana ramakore regumi nemapfumbamwe.
Yakapihwa pahwaro hweepistemology uye modal logic. Aive akatendeka pakudzidziswa kwake kwemasvomhu uye aikwanisa kupokana zvakanaka kuti kuomarara kwekufunga kwevanhu kunogona kududzirwa mumutauro wekuverenga. Kamwe kuverenga uku kwanzwisiswa, inogona kunge iri mhinduro yekugadzirisa kupesana kwemaonero uye nharo pakati pevanhu. Nechikonzero ichi, anozivikanwa semumwe wevanonyanya kukosha logogi venguva yake, kubvira Aristotle.
Pakati pezvimwe zvinhu, aikwanisa kutsanangura zvivakwa uye nzira yezvinyorwa zvakasiyana zvemitauro senge mubatanidzwa, negation, set, kusanganisa, kuzivikanwa uye isina chinhu seti, uye kusangana. Zvese zvaive zvinobatsira kunzwisisa uye kuita kufunga kwakaringana uye kuremekedza kune mumwe nemumwe izvo zvisiri izvo. Zvese izvi zvinoumba chimwe chezvikamu zvikuru zvekusimudzira kweepistemic logic uye modal logic.
Mafirosofi aLeibniz akapfupikiswa muchikamu chekuzvimiririra. Yakaitwa muma1660s uye inodzivirira kuvapo kwemumwe munhu kukosha iyo izere iyo pachayo. Izvi zvinodaro nekuti zvinokwanisika kusiyanisa kubva pane yakatarwa. Iyi ndiyo yaive nzira yekutanga kune dzidziso yeGerman yemamonads. Ichi fananidzo nefizikiki umo munopikiswa kuti mamonads ndiyo nzvimbo yepfungwa izvo maatomu ari munzvimbo yepanyama. Iwo ndiwo ekupedzisira maficha ezvese uye chii chinopa chimiro chakakura pakuve kuburikidza nezvinhu zvakadai seinotevera: mamonari ndeokusingaperi sezvo asingawori kuita zvimwe zvidimbu zvakapfava, iwo ega, anoshanda uye anozviisa pasi pemitemo yavo.
Zvese izvi zvinotaurwa se mumiriri wega wezvinhu zvese pachazvo.
Sezvauri kuona, Leibniz akapa zvipo zvakawanda kunyika yesainzi nefilosofi. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvaLeibniz muhupenyu hwake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Leibniz Biography